एकाएक ’हराए‘ चिनियाँ अर्बपति ज्याक मा ! – Aarthik Dainik
गृहपृष्ठ ∕ अन्तर्राष्ट्रिय ∕ एकाएक ’हराए‘ चिनियाँ अर्बपति ज्याक मा !
आर्थिक दैनिक पुस २३, २०७७ १४:२५
अलिबाबाका संस्थापक ज्याक मा विगत दुई महिनायता सार्वजनिक रुपमा देखिएका छैनन् । यो क्रममा उनले एउटा टिभी शोमा निर्णायकको रुपमा काम गर्नुपर्नेमा त्यसमा पनि नदेखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनी कहाँ छन् भन्नेबारे अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।
चिनियाँ नियामकीय निकायबाट अलिबाबाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु भएका खबरहरु केही दिनअघि सार्वजनिक भएका थिए । ज्याक अक्टोवरको अन्त्यतिर शांघाईको एउटा फोरममा सार्वजनिक रुपमा देखिएका थिए । जहाँ उनले भाषण गर्दै चीनको नियामकीय प्रणालीको खुलेर आलोचना गरेका थिए । त्योसँगै सरकारी अधिकारीसँग उनको तनाव बढेको थियो भने अलिबाबाकै एन्ट ग्रुप फिनटेकको ३७ अर्ब अमेरिकी डलरको आईपीओ समेत निलम्बनमा परेको थियो ।
मालाई नोभेम्बरमा उद्यमीहरुका लागि गेम शो ‘अफ्रिकाज बिजनेस हिरोज’को अन्तिम शृंखलामा निर्णायकबाट प्रतिस्थापन गरिएको गत शुक्रबार द फाइनान्सियल टाइम्सले जनाएको थियो । यसबारे रोयटर्सले अलिबाबाका प्रवक्तासँग प्रतिक्रिया माग्दा सोमबार त्यो परिवर्तन समय नमिलेका कारण भएको उनले बताएका थिए ।
तर माको अनुपस्थितिमा सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा भने अनेक अड्कलबाजी सुरु भएको छ । ट्विटर चीनमा चल्दैन । चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा भने यसबारे कुनै विषयवस्तु वा चासो नबनेको बताइएको छ । यसै पनि चीनमा यस्ता विषयवस्तु प्रकाशन प्रसारणमा निषेध गरिन्छ । अक्टोबरको भाषणपछि चिनियाँ नियामकहरुले माविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताइएको छ । त्यसलगत्तै सरकारी अधिकारीहरुले अलिबाबाको व्यवसाय शैली प्रतिस्पर्धाविरोधी भएको आरोपमा अनुसन्धान सुरु गरेको घोषणा गरेका थिए ।